पहिलो पटक क्रास्नोडार आउने धेरै पर्यटक, ग्लास र ठोस गगनचुम्बी भवनहरू को केन्द्र मा देख्न अपेक्षा। तर, आफ्नो आश्चर्य गर्न, तिनीहरूले साँघुरो सडकमा उच्च बाड पछि घरहरू देखे। को Cossacks यस प्राचीन घर - शहर को संस्थापक।
आज यो रूस को दक्षिण मा एक ठूलो, तेजी देखि बढ शहर हो। केही रिपोर्ट अनुसार, त्यहाँ रूस, घरहरू र सामाजिक सुविधाहरु को निर्माण मा सबै भन्दा ठूलो छ।
पश्चिमी, Karasunsky, मध्य, Prikubansky - क्रास्नोडार administratively चार ठूलो जिल्लामा विभाजित। साथै, यसको सीमा भित्र5ग्रामीण जिल्लामा र 29 बस्तियों छ।
बिस्तारै, hypnotically यसको अतिथि मोहीतपार्नु Name - क्रास्नोडार एउटा अचम्मको क्षमता छ। मुख्य शहर - यो महसुस गर्न, पर्याप्त रातो सडक लागि हिंड्न। मलाई विश्वास त्यहाँ हेर्न कुरा हो - बिस्तारै, मायालु लालटेन रूखहरू, सडकमा को सफाई संग सजाया को धेरै स्मारक र फोहराहरू। लगभग सबै शहर को बेड वर्ष को लागि फक्रिएको गुलाफ (र त्यहाँ एक विशाल संख्या हो)। शहर मा आफ्नो रहन को पहिलो मिनेट देखि उहाँले आफ्नो बासिन्दा द्वारा प्रेम छ भनेर थाह छ। तिनीहरूले कोमलतासाथ प्राचीन स्मारक लागि, आफ्नो वास्तविक गृहनगर को अति गर्व छ ख्याल।
"फोर्ब्स" को सूचीमा
हरेक वर्ष क्रास्नोडार रूस, सबैभन्दा Habitation लागि अनुकूल को शहर बीच पहिलो स्थान जित्यो। 2012 मा, शहर सबै भन्दा राम्रो "रूसी अखबार" को रूपमा पहिचान गरिएको थियो। व्यापार समुदाय पत्रिका "फोर्ब्स" र "आरबीसी" अक्सर को शहर क्रास्नोडार, व्यापार को लागि आकर्षक र आफ्नो रहन को लागि राम्रो रूपमा बोलिने छ मा एक चिरपरिचित। 2013 मा, त्यो जीवन र यसको मूल्य गुणस्तर को अनुपात मा एक नेता रूपमा मान्यता थियो।
2013 मा सोची मा ओलम्पिक संग जडान मा क्रास्नोडार क्षेत्र को अधिकारीहरु केन्द्रित ध्यान छ भने, त्यसपछि 2014 मा नै पैसा र प्रयास क्रास्नोडार गरिनेछ। स्वाभाविक, ठूलो परिवर्तन शहर आशा गरिन्छ।
पश्चिमी जिल्ला शहर को पश्चिम मा स्थित छ। इलाका मात्र 4% - उहाँले क्षेत्र को मामला मा सानो छ। Adygea को सीमाना मा दक्षिण, मा।
अर्को जिल्ला क्रास्नोडार शहर को पूर्व मा स्थित छ। Karasunsky क्षेत्र, वा बरु काउन्टी, को KUBAN र केन्द्रीय जिल्ला द्वारा सीमा, Adygea र Dinskaya जिल्ला को गणतन्त्र संग। यो क्रास्नोडार शहर गर्नेहरूलाई भन्दा एक धेरै ठूलो क्षेत्र हो। Karasunsky जिल्ला (जिल्ला) यसको क्षेत्र मा एक विमानस्थल, "Paszkowski" छ।
को Karasunsky स्थित Prikubansky रेयन (क्रास्नोडार) अर्को। यो शहर को पश्चिमोत्तर भाग मा स्थित छ। 474 वर्ग मीटर - यो सबै भन्दा ठूलो जिल्ला हो, एक क्षेत्र। मी। Prikubansky क्षेत्र (क्रास्नोडार, रूस) केन्द्रीय, Karasunskaya र पश्चिमी जिल्ला संग सिमाना मा।
शहर को दक्षिण मा केन्द्रिय (भित्री-शहर जिल्ला) क्रास्नोडार छ। यहाँ जिल्ला "Cheryomushki", रेलवे स्टेशन, स्टेडियम "KUBAN" छन्।
क्रास्नोडार शहर जिल्लामा
आफ्नो शहर तेह्र छ। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य फरक। क्रास्नोडार बासिन्दा विभिन्न क्षेत्रहरु विभिन्न प्रतिक्रियाहरू प्राप्त। आज हामी प्रत्येक को फाइदा र बेफाइदा बुझ्न प्रयास गर्नेछ।
सायद, यो क्षेत्र शायद सबैभन्दा शहर मा लोकप्रिय छ। 1980 मा, त्यो निर्माण गर्न उच्च वृद्धि भवनहरु थाले। अहिले यो घनी आबादी क्षेत्र। यो बाबजुद KUBAN को बैंकहरू साथ आज गहन निर्माण भइ रहेको छ। प्रमुख राजमार्गहरू जिल्ला - अक्टोबर सडक को सूचीपत्र र सुरक्षा अधिकारीहरु को 70th वार्षिकोत्सव। यसलाई ट्राम, बस, ट्याक्सी, र प्रत्यक्ष द्वारा शहर मा कहीं प्राप्त गर्न सजिलो छ। , भन्न सक्छ, क्षेत्र राम्रो विकसित छ र स्वायत्त छ। यहाँ 80 भन्दा बढी हजार मान्छे बाँचिरहेका छौं।
स्थानीय बासिन्दा को समीक्षा द्वारा न्याय, क्रास्नोडार क्षेत्र को Jubilee एकदम रहन सहज छ। त्यहाँ साग धेरै छन् - बच्चाहरु संग जवान आमा द्वारा सराहना विमान रूख Boulevard र वृद्ध मान्छे यहाँ हिंड्न प्रेम। एउटै जहाँ तपाईं KUBAN को ताजा हावा श्वास फेर्न सक्नुहुन्छ क्षेत्र बासिन्दाहरू र क्रिसमस Waterfront बारेमा भने। यस क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा शहर को कुनै पनि छिटो प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता छ। पसलहरूमा, क्याफेहरू, Laundries, अस्पताल र क्लिनिक - को पाठ्यक्रम, बासिन्दा जीवित लागि सबै आवश्यक सुविधाहरु को उपस्थिति संग खुसी छन्।
यसको मात्र drawback, बासिन्दा अनुसार, ट्राफिक जाम कारण, हाय अपरिहार्य जो सडक junctions, को अधिभार छ।
अक्सर, शहर बासिन्दा यस भाग "दुई विमान।" कल यो पाइलटहरूले को सम्मान मा erected एक स्मारक कारण हो। एक उच्च स्तम्भ मा यी दुई विमान स्थितिमा, महोत्सव क्रास्नोडार क्षेत्र को सजाया।
यो क्षेत्र को विकास 60s मा सुरु भयो। अब यहाँ आवास निर्माण को नयाँ राउन्ड छ। नयाँ मुलुकमा पूर्व को खेत, स्वामित्वको अन्वेषण "सनी।" क्षेत्र Habitable भन्दा बढि छ। तपाईं five- र नौ-मंजिल्ला रूपमा "ख्रुश्चेव" हरेक चरण र "brezhnevki" देख्न सक्नुहुन्छ। आवश्यक रूपमा सोभियत समयमा निर्माण थिए Kindergartens र विद्यालय, एक धेरै। पूर्व राज्य खेत को दिशा मा सार्दै "सौर" तपाईंले केही वर्ष पहिले आवासीय जटिल बनाएको प्राप्त गर्न बाध्य हुनुहुन्छ "सनी।"
घरहरू आधुनिक, विशाल अपार्टमेन्ट मा बासिन्दा को राय मा। एक सानो थप, तपाईं सडक Jana Poluyan मा प्राप्त हुनेछ - KUBAN र क्रान्तिकारी राजनीति, र सडक Atarbekova मा। तिनीहरूले पसलहरूमा, क्याफेहरू, अस्पताल, सौंदर्य सैलून, केंद्रित छन् आदि तिहार क्षेत्र balneolechebnitsa क्रास्नोडार छ - .. एक सानो रिसोर्ट जहाँ सही र आफ्नो स्वास्थ्य क्रास्नोडार बच्चाहरु सुधार, र पूर्ण मुक्त, जबकि वयस्क विशुद्ध नाममात्र शुल्क बनाउन। यो यस्तो संस्थाहरु उपचार को लागि सामान्य छ - खनिज स्नान, वर्षा, माटोको wraps, आदि ...
यस क्षेत्रमा वसोवास को प्रतिक्रियाहरू अध्ययन भएको, हामी यस सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा शहर को क्षेत्रहरु पछि खोजे को छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसले सम्पूर्ण शहर लागि पर्याप्त हुनेछ कि त्यहाँ धेरै हरियो र ताजा हावा हो, - धेरै क्रास्नोडार यो बच्चाहरु संग परिवार को लागि आदर्श पाउन। साथै, त्यहाँ जो कुनै पनि समस्या बिना शहर वरिपरि सार्न अनुमति दिन्छ उत्कृष्ट परिवहन मोडतर्फ छ।
तपाईं पहिलो यो दक्षिणी शहर मा आइपुग्दा, तपाईं क्रास्नोडार नक्सा आवश्यक छ। क्षेत्रमा राम्रो थाह, त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्न निश्चित लागि थाह छ।
कसैले यो क्षेत्र सोभियत विगतका जोडिएको केही तरिका छ भनेर सोच्छ भने, उहाँले गहिरो गलत छ। एउटा नाम को reminiscent पछिल्लो पटक मा, र पनि, सायद, लगभग हरेक यार्ड मा kindergartens। यो एक राम्रो ठूलो शहर हो कि उल्लेख गर्नुपर्छ - क्रास्नोडार। Komsomolsk क्षेत्र ऐतिहासिक केन्द्र हटाइयो। र यसलाई एक महत्वपूर्ण बेफाइदा विचार छ।
तथापि, सी एम आर एकदम आत्म-समावेश छ, तर समस्या को remoteness छैन छुट गर्न सकिन्छ। को Komsomolsk क्षेत्र आउँदै, तपाईं विशाल भंडारगृहों, डेटाबेस किनमेल क्षेत्र हेर्न सक्छन्। जिल्ला को क्षेत्र मा बजार, पसल, उपभोक्ता सेवाहरू वस्तुहरू छन्। उहाँले सक्रिय निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ नयाँ चौथाई छन्। स्थित जो भित्र Kindergartens, खेल को मैदानों, विद्यालय एक वर्ग, को रूप मा निर्मित घर - यसको बासिन्दा यहाँ राम्रो लेआउट बाहिर लाग्यो भन्ने विश्वास गर्छन्। यो एक विशाल पैदल क्षेत्र छ। यहाँ एउटा ठूलो, सफा हावा छ, र रूख शाखा मा squirrels। मात्र drawback केन्द्र देखि यसको दूरी हुन मानिन्छ।
धेरै नागरिकहरु यो सबैभन्दा रोचक र अस्पष्ट एकै समयमा विचार गर्नुहोस्। कारण के हो? यो पुरानो शहर हो भन्ने तथ्यलाई - क्रास्नोडार। मध्य क्षेत्र यसको क्षेत्र भव्य नयाँ घरमा, सफा र राम्रो कायम क्षेत्र, dilapidated घरहरू संग मूल फोहरा मा संयोजन, कुनै अन्य जस्तै छ। केही सडकमा गर्न अझै धेरै वर्ष को लागि शहर मा लिन्छ जो पुनर्निर्माण, गर्न मिल्यो छैन।
यस क्षेत्रमा, यो शहर मा लगभग सबै भन्दा रोचक कुरा सबै केन्द्रित। उदाहरणका लागि, रातो सडक, जो सप्ताह मा एक पैदल बन्नेछ। वा थिएटर स्क्वायर, जहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहर घटनाहरू। यहाँ संग्रहालयहरु र थिएटर, मनोरञ्जन स् को एक ठूलो संख्या र एक सुन्दर पार्क तिनीहरूलाई छन्। विजय 30 वार्षिकोत्सव तपाईं हिंड्न, को सवारी र बच्चाहरु सिर्फ एक महान समय छ सवारी जसमा।
पूर्णतया नयाँ साइटहरु संग, त्यहाँ आवासीय क्षेत्रमा छन्, हालै क्रास्नोडार शहर मा आफ्नो fortieth वार्षिकोत्सव मनाइन्छ।
Gidrostroy क्षेत्र (को स्थानीय अक्सर कल रूपमा) बाद पर्छ। यो प्रारम्भिक 70s मा बनाइएको थियो र क्रास्नोडार मा जलाशय को बिल्डर्स को सम्मान मा नाम थियो। Gidrostroiteley क्षेत्र रूखहरू, shrubs र फूल धेरै विशाल नम्बर आकर्षित गर्छ। यो एक साँचो स्वर्ग छ। प्रसन्न - स्थानीय मान्छे यहाँ बस्दा विचारमा।
स्वाभाविक मात्र होइन प्राकृतिक सौन्दर्य मान्छे आकर्षित। उत्कृष्ट पूर्वाधार को क्षेत्र मा, धेरै विद्यालय, एक क्लिनिक, खेलकुद स्कूल, र यति मा छ। यो कुनै एक indifferent क्रास्नोडार छोड्छ। जिल्लामा यो तपाईंले केही शहर मा भएको छु जस्तो देखिन्छ भनेर भिन्न छन्। तर यो मात्र एउटा भ्रम छ। यो एक, बहुमुखी र बहु-शहर क्रास्नोडार।
केही क्रास्नोडार क्षेत्रहरु बीच सामान्य कुरा छ। यो पुरानो बस्तियों विशेष गरी साँचो हो। पाँच तले भवन धेरै संग, धेरै हरियो - यो जिल्ला महोत्सव जस्तै बिट छ। तथापि, Cheryomushki थप परिवहन भन्दा भीड, र फलस्वरूप, अधिक हल्ला। हामी ज्ञात फ्लिया बजार Vishniac नागरिक। यो जहाँ मान्छे सबै शहर भन्दा, र पनि नजिकका गाउँमा देखि देखि मान्छे किनमेल लागि आउन एक विशाल क्षेत्र छ। यहाँ धेरै हल्ला र अपार्टमेन्ट सबैभन्दा सहज छैन - यो क्षेत्र शायद संग पुरस्कृत छ Accolades।
सडक जिल्ला, मास्को
विशेष उल्लेखनीय क्रास्नोडार को नयाँ जिल्लाको हो। सामान्यतया, तिनीहरूले भवन र निजी क्षेत्र मिलेर। को मास्को Rostov सडक जिल्ला शहर को सरहद मा, राजमार्ग र सडक रूसी बीच स्थित छ। यो एक दलदल मा बनाइएको थियो, त्यसैले पनि एक हल्का वर्षा समयमा यो वरिपरि सार्न एकदम गाह्रो छ। को घरहरू आपसमा नजिक निर्माण गरिन्छ। यो निजी विकासकर्ताहरूले को काम हो। बासिन्दा त्यहाँ बिजुली र सीवरेज समस्या अक्सर हुन् भनेर गुनासो। अक्सर, तिनीहरूले आफ्नै जेनेरेटर प्रयोग गर्न छ। र यो सबै घर भवन मा हुन्छ! क्षेत्र घनी आबादी छ। शहर मा सबै भन्दा कम आवास मूल्यहरु छ - र यो बुझ्ने छ। हुनत, इमानदार, के आवास छ ...
क्रास्नोडार केही क्षेत्रमा हुनत आज यो ठूलो आवास परिसर छ नक्सामा चिन्ह छैन, त्यसैले हामी तिनीहरू पनि ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
यस क्षेत्रमा केही सडकमा छ। यो पहिले नै वर्षा पछि मशरूम जस्तै बढ्न जारी जो उच्च वृद्धि भवनहरु, एक विशाल संख्या निर्माण गरेको छ भन्ने तथ्यलाई लागि प्रसिद्ध छ। यो स्थान पहिले एक wasteland थियो, त्यसैले त्यहाँ dilapidated छाप्राहरू वा निजी क्षेत्र पत्ता लगाउन सक्षम छैन। जिल्ला ब्रान्ड नयाँ उच्च वृद्धि हुन्छन्। , विशाल र उज्ज्वल, तर प्राय तिनीहरूले मानिसहरूलाई गएर किनेको हो हुनत यो जवान जिल्ला जस्तै स्थानीय - यहाँ अपार्टमेन्ट राम्रो निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ।
यसको बेफाइदा पनि settlers गरिब पूर्वाधार समावेश गर्नुहोस्। घरहरू निर्माण विद्यालय र Kindergartens को निर्माण को टाढा अगाडि छ। त्यहाँ पार्किंग संग गम्भीर समस्या हो, र सडक गरिब छन्।
हालसालै, क्रास्नोडार क्षेत्र को धेरै आफ्नो कर्मचारीहरु लागि ठूलो औद्योगिक कम्पनीहरु नजिकै निर्माण गरिन्छ। म कुनै अपवाद र बोट उपकरण (अब defunct) थियो। यस क्षेत्रमा त्यहाँ एक स्कूल, दुई कलेज र तीन Kindergartens छ, सामान्य पाँच तले भवन र आधुनिक नौ-मंजिल्ला भवन छन्। Chistyakova मा एउटा सुन्दर पार्क बगैंचाहरु। पूर्वाधार राम्रो-विकास गरे।
यो स्थान बारे न्यानो जिल्ला वसोवास। तिनीहरूले शहर को केन्द्र गर्न निकटता द्वारा आकर्षित गर्दै छन्, क्षेत्र मा राम्रो पारिस्थितिक अवस्था - कुनै ठूलो औद्योगिक उद्यम र व्यस्त सडक हो। युवा आमाबाबुले राम्ररी सुसज्जित छोराछोरीको खेल मैदान र क्षेत्र नछोडी पार्क मा बच्चा हिंड्न मौका प्रोत्साहन। त्यहाँ सुधार डिजाइन संग पत्थर को खम्बा-ईटा भवनहरु को एक सक्रिय निर्माण हो, त्यसैले आफ्नो जीवित अवस्था सुधार गर्न चाहने सबै आफ्नो क्षेत्रमा रहन रुचाउँछु।
"संघाई" मानिसहरू शहर को यो क्षेत्र भनिन्छ। यो analogy आकस्मिक छैन - को घरहरू प्रत्येक अन्य नजिक निर्माण गरिन्छ। सडकमा मा, धेरै सफा छैन, सौम्य यसलाई राख्न। यो क्षेत्र को इतिहास मात्र केही वर्ष पहिले थाले। एक अनौठो संयोग द्वारा, यहाँ सबै भन्दा "आर्थिक" विकासकर्ताहरूले भेटे। तिनीहरूले शहर को केन्द्र नजिकै स्थित रूसी र मास्को को सडकमा बीच भूमि टुक्रा, समातिए। छिमेकी घरहरू को बासिन्दा विन्डो बाहिर देख, प्रत्येक अन्य कुरा गर्न सक्ने साइट यति कस अप निर्माण गरिएको छ। क्षेत्र मा Kindergartens र विद्यालय निर्माण मा थिएन - तिनीहरूले बेच्न सक्छौं, तर आफ्नो निर्माण पैसा लगानी गर्न कुन अर्थमा किनभने ...
यो क्षेत्र को लाभ एक ईटा छलफल गर्न सकिन्छ - तिनीहरूले न्यानो र हल्ला छैन। साथै, धेरै महत्त्व क्षेत्र मा आवास को कम मूल्य छ। समीक्षा उहाँलाई फेला पार्न सकेन।
यो निजी क्षेत्रको मान्नेहरूले लागि सिर्जना गरिएको थियो। जहाँ तपाईं inexpensively आफ्नो घर निर्माण गर्न सक्छन्, र एकदम शहर केन्द्र बन्द गर्नुहोस्। त्यसैले "Pashkovku" अक्सर एक गाउँ रूपमा उल्लेख इलाका अधिकांश निजी घरहरू कब्जा छ केही उच्च वृद्धि भवनहरु छन्।
स्थानीय, आफ्नो जिल्ला प्रेम धेरै आफ्नै घरमा बस्न रुचि किनभने, तर यो अन्तर्गत-विकास पूर्वाधार र सडक मा उजुरी धेरै सुनिन्छ। साथै, बासिन्दा छैन सडक प्रकाश को राज्य संग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।
क्रास्नोडार को उत्तर-पूर्वी मा क्षेत्रीय क्लिनिकल अस्पताल № 1 छ। SV Ochakovo। यो जटिल आठ अलग विशेष केन्द्र हुन्छन्। यो विजय, रूस, मे 1, Cherkassy को 40 वर्ष घेरिएको सडक मा स्थित छ। यो क्षेत्रीय क्लिनिकल अस्पताल (सीएमसी) को क्षेत्र छ। जिल्ला को 70s मा निर्मित हुन थाले, तर सक्रिय हाल को वर्ष मा विकसित भए। आज, धेरै ठूलो आवास परिसर यहाँ र योजना निर्माण - धेरै अधिक को निर्माण।
क्षेत्र "जर्मन गाउँ"
परिसर को Analogs को क्रास्नोडार क्षेत्र छैन। क्षेत्र एक मिश्रित जर्मन र रूसी शैलीहरू मा डिजाइन गरिएको छ। बासिन्दा किंडरगार्टन मा एक बच्चा लिन वा सना भ्रमण क्षेत्र छोड्न छैन भनेर यसको पूर्वाधार स्वायत्त छ। सबै पैदल दूरी छ। मूलतः, क्षेत्र कटेज निर्माण गरिएको छ, तर त्यहाँ उच्च वृद्धि भवनहरु छन्। छिमेकी कुलीन अचल सम्पत्ति यहाँ महंगा छ, तर मान्छे तिनीहरूलाई खुसी छन्।
यो क्षेत्र "एन्का" प्राय भनिन्छ। टर्की बिल्डर्स को 90 वर्ष मा सैन्य लागि आवासीय जटिल बनाए। तपाईंले पहिले नै अंदाजा रूपमा, निर्माण कम्पनी को नाम - "एन्का"। तिनीहरूले क्षेत्रको बासिन्दा भन्न रूपमा, घर बस भव्य राम्रो लेआउट संग घर छ, र हो, प्रसंगवश, छैन सस्तो छ। छिमेकी धेरै आधुनिक देखिन्छ - यस गज मा छोराछोरीको खेल को मैदानों राम्ररी सुसज्जित नयाँ घर, प्यारा किंडरगार्टन। यो धेरै राम्रो तरिकाले कायम, शान्त र सहज क्षेत्र क्रास्नोडार शहर दावा। एउटै नाम को एक ठूलो सपिङ्ग सेन्टर किनभने छिमेकी "लाल वर्ग" त्यसैले भनिन्छ।
केही मानिसहरू अरूलाई केन्द्रीय हलचल सडकमा टाढा बस्न खुसी छन्, जबकि यो शहर को केन्द्र देखि केहि टाढा छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यो हामीले सार्वजनिक परिवहन सजिलै चलिरहेको थप्नु पर्छ।
अर्को नयाँ कुलीन क्षेत्र। विभिन्न हाइट्स घरहरू संग बनाए। वीआईपी-वर्ग तिनीहरूलाई मा अपार्टमेन्ट। जिल्ला विद्यालय, Kindergartens, gymnasiums, अस्पताल निर्माण गरे। यो पनि अर्थशास्त्र र आधुनिक प्रविधिको संस्थान घरों।
स्वाभाविक, क्षेत्र जस्तै पूर्वाधार को बासिन्दा एकदम सन्तुष्ट, त्यसैले मात्र सकारात्मक यसको बारेमा समीक्षा छ।
आज हामी एक धनी इतिहास, एक अनुकूल जलवायु र धेरै अनुकूल मान्छे संग अर्को प्राचीन रूसी शहर भेटे। क्रास्नोडार अधिकांश क्षेत्रमा तपाईं आफैलाई कल सुझाव। यो हाम्रो लेख र आदिवासी बासिन्दा समीक्षा गर्न मद्दत गर्नेछ।
Vorgolsky चट्टानों। Vorgolskie Rocks: त्यहाँ कसरी पुग्न। Vorgolsky रक: नक्शा
Jamgarovsky तालाब, लसोनोस्त्रोस्की जिल्ला। उपनगरहरूमा मनोरञ्जन र माछा
टर्की Kemer: वाटर पार्कले पर्यटकहरूलाई निम्तो दिन्छ
शुतुरमुर्ग फर्न - सुरुचिपूर्ण प्राचीन
Warface: मा-खेल उपलब्धिहरू
तपाईं समाज चाहनुहुन्छ कि5मूर्ख कुराहरू
Phraseologism मूल्य "को झिंगा को हात्ती गर्छन्।" म बढाउनु पर्छ?